မျက်မှန်လေး: စင်ကာပူ မှ အိမ်ပိုင်ရှင်များ အိမ်ခန်းပြန်ငှားရန် သိသင့်သည့် အချက်များ
စင်ကာပူမှာ အိမ်ဝယ်ပြီးတဲ့လူတိုင်းလိုလို အိမ်ခန်းတွေကို ပြန်ငှားကြတာ ထုံးစံလိုလိုပါဘဲ။ အဲဒီလိုပြန်ငှားတဲ့ အခါ စင်ကာပူ အိုးအိမ်ဖွံဖြိုးတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (HDB) ရဲ့ စည်းကမ်းချက်လေးတွေ သိရှိရအောင်လို့ ပြန်လည်မျှဝေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စည်းကမ်းချက် ၈ ချက်ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေက တော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁. အိမ်ခန်းငှားခွင့် ရှိ၊မရှိ (အိမ်ရှင်)
၂. အများဆုံးငှားနိုင်ခွင့် အခန်းအရေအတွက်
၃. အိမ်ခန်းငှားခွင့် ရှိ၊မရှိ (အိမ်ငှား)
၄. အိမ်ငှားခွင့်ကို မှတ်ပုံတင်ခြင်း
၅. အိပ်ခန်း ငှားခွင့် ကာလ
၆. အိမ်ငှားခွင့် စည်းကမ်းချက်များ
၇. အွန်လိုင်းမှာ မှတ်ပုံတင်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အခန်း ၃ ခန်း ( အိပ်ခန်း ၂ ခန်း) အိမ် နှင့် အထက် အိမ်မျိုးမှ လျှင် အိပ်ခန်း စငှားခွင့်ရှိပါတယ်။ အိပ်ခန်း ၁ ခန်းထဲပါတဲ့ အိမ်မျိုးဆိုလျှင် အိပ်ခန်းငှားခွင့်မရှိပါဘူး။
အိပ်ခန်းငှားရာမှာ အိမ်ရှင်တွေက HDB ရဲ့ သဘောတူညီချက်ရရှိရန် မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ငှားထားတဲ့ အိမ်ငှားတွေရဲ့ နေထိုင်ခွင့် လက်မှတ် (PR, Spass,EP,WP,Student Pass)စတာတွေကိုတော့ အိပ်ခန်းငှားပြီး တစ်ပါတ်အတွင်းမှာ HDB ကို မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ကိုယ့်အိမ်ကအိမ်ငှားထွက်သွားရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ နောက်တစ်ယောက် ပြောင်းလာသည်ဘဲဖြစ်ဖြစ် HDB ကိုအကြောင်းကြားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုယ့်အိမ်ရဲ့ အခန်းအရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီး အများဆုံးငှားနိုင်သည့် အခန်းအရေအတွက် နှင့် အများဆုံးနေနိုင်သည့် လူဦးရေ အရေအတွက် ကိုကန့်သတ်ထားပါတယ်။ အောက်ပါဇယားမှာကြည့်ရှူနိုင်ပါတယ်။
အများဆုံး နေနိုင်သည့် လူဦးရေအရေအတွက်
၃ ခန်းအိမ် ( အိပ်ခန်း ၂ ခန်း၊ မီးဖိုချောင်၊ ဧည့်ခန်း ပါသောအိမ်)
အိပ်ခန်း ၁ ခန်း
၄ ခန်းအိမ် (အိပ်ခန်း ၃ ခန်း၊ မီးဖိုချောင်၊ ဧည့်ခန်း ပါသောအိမ်)
၅ ခန်းအိမ် (အိပ်ခန်း ၃ ခန်း၊ မီးဖိုချောင်၊ ထမင်းစာခန်း၊ ဧည့်ခန်း နှင့် store room ပါသောအိမ်)
Executive (အိပ်ခန်း ၃ ခန်း၊ မီးဖိုချောင်၊ ထမင်းစာခန်း၊ ဧည့်ခန်း နှင့် store room ပါသောအိမ်)
မှတ်ချက် - store room၊ မီးဖိုချောင် နှင့် ဧည့်ခန်းများကို အိပ်ခန်းအဖြစ်ငှားပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။
အခန်းငှားတဲ့ သူတွေဟာ အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီရပါမည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် ကဒ်ပြား ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ရပါမည်။ Short Visit Pass ကတော့ချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ PR, EP, SPass, WP, Student Pass နဲ့ Long Term Social Visit Pass ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေကိုသာ ငှားရမ်းပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
ကဒ်ပြားရဲ့ သက်တမ်းက အနည်းဆုံး ၆ လအထိရှိရပါမည်။ ဥပမာ.. ဒီနေ့ စငှားမယ်ဆိုရင် သူရဲ့ ကဒ်ပြားသက်တမ်း ကုန်ဆုံးတဲ့နေ့ က ၁၃ရက် စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၃ အထိရှိမှ ငှားလို့ရပါမယ်။
တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် ကဒ်ပြား ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ပေမယ့် Work Permit ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ သူတွေဟာ ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်သမားတွေ ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် မလေးရှားလူမျိုး ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်သမားတွေကို ငှားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
အိမ်ငှားတွေဟာ အိမ်ပိုင်ရှိသူ ဖြစ်လို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကွာရှင်းထားသူ ဖြစ်ရင်တော့ နှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်က အိမ်ငှားနေလို့ရပါတယ်။ အိမ်ပိုင်ရှိသူ ဖြစ်ပေမယ့် အဲဒီအိမ်ကို တစ်အိမ်လုံးငှားခွင့်ရှိပြီးသား ဆိုရင်တော့ တစ်ခြားအိမ်မှာ အိမ်ငှားခွင့်ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသား၊ ဧည့်သည်တွေကို အိမ်ငှားခွင့်မရှိပါဘူး ။ Social Visit Pass ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေကို ဆိုလိုပါတယ်။
အိမ်ပိုင်ရှင်တွေဟာ အိမ်စငှားတဲ့ရက် မှ ၇ ရက်အတွင်း HDB မှာ မှတ်ပုံသွားတင်ရပါမည်။ အိမ်ငှားတွေရဲ့ IC ကဒ်တွေရဲ့ မိတ္တူကိုယူဆောင်သွား ရပါမည်။HDB ကို မသွားဘဲ online တင်ရင်လည်း ရပါတယ်။ အောက်မှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။
အိမ်ပိုင်ရှင်တွေဟာ အိမ်ငှားအပြောင်းအလဲရှိရင်ဖြစ်စေ၊ အိမ်ငှား ရဲ့ Work Pass သက်တမ်းတိုးပြီးရင်ဖြစ်စေ အိမ်ငှားရမ်းသူတွေရဲ့ IC ကဒ်တွေရဲ့ မိတ္တူကိုယူဆောင်သွား HDB ကိုသွားပြီးတော့ အကြောင်းထပ်ကြားရပါမယ်။
မှတ်ပုံမတင်ထားရင်တော့ အိပ်ခန်းငှားရမ်းခွင့် ဟာ တရားမ၀င်ဘူးလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အဲလိုဆိုရင် အိုးအိမ်းဖွံဖြိုးရေး အက်ဥပဒေအရ အိမ်ပိုင်ရှင်ကို HDB ကတရားစွဲဆိုနိုင်ပါတယ်။ ထပ်ပြီးဖောက်ဖျတ်ရင်တော့ အိမ်ကို သိမ်းတဲ့ အထိ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်နိုင်ပါတယ်။
၅. အိမ်ငှားခွင့် ကာလ
အိမ်ပိုင်ရှင်များဟာ အိပ်ခန်းကို ရက်တို ငှားခွင့်မရှိပါဘူး ။ အနည်းဆုံး ၆လ နှင့်အထက်မှာ ငှားရပါမယ်။ အများဆုံးကတော့ ၃ နှစ်ပါ။ ၃ နှစ်ပြည့်သွားရင် ပြန်ပြီး မှတ်ပုံတင်ရပါမယ်။
အိမ်ရှင် နှင့် တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ရရှိသူများသာ နေထိုင်ရပါမည်။
အိမ်ခန်းငှားနေပိုင်ခွင့် ရှိသူများကို သာ ငှားရမ်းရပါမည်။
သတ်မှတ်ထားသော လူဦးရေထက် ကျော်လွန်ပြီး ငှားရမ်းခြင်းမပြုရပါ။
တစ်ဆင့်ပြန်လည် ငှားရမ်းခြင်း မပြုရပါ။
အိမ်ငှားရမ်းသူတွေဟာ အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ ကချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များကို လိုက်နာရပါမည်။ အကယ်ရ်ျ ချိုးဖောက်ခဲ့ခြင်းရှိပါက အိမ်ရှင်များအပေါ်တွင်သာ တာဝန်ရှိသည်ဟု ယူဆပါသည်။
၇. အွန်လိုင်းမှာ မှတ်ပုံတင်ခြင်း
အွန်လိုင်းမှာ မှတ်ပုံတင်ရန် ဒီ link ကို သွားပြီးမှတ်ပုံတင်ရပါမည်။
၁. မိမိ SingPass ဖြင့် Login ၀င်ပါ။
၂. My Flat ကို နှိပ်ပါ။
၃.Subletting (ငှားရမ်းမှုကို နှိပ်ပါ။)
၄.အခန်းစတင်ငှားရမ်းခြင်း rule ကိုဖတ်ပြီး Continue ကိုနှိပ်ပါ။
၅. Section A မှာ ဘာကြောင့်ငှားမှာ လဲ ၊ ဘယ်နှစ်ခန်းငှားမှာလဲ ဆိုတာရွေးပြီး Continue ကိုနှိပ်ပါ။
၆. Section B မှာ
စတင်ငှားမယ့်ရက် (Commencement Date of Subletting) : ဒီမှာသတိပြုရမှာက ဒီနေ့ Date နဲ့ Back date ၇ ရက်သာ ကွာလို့ရပါမယ။် သူတို့က ငှားပြီး ၇ ရက်အတွင်း register တင်ရမယ် လို့ဆိုထားတာကိုး။
ငှားရမ်းမည့်ကာလ (Period of Subletting(Months): ၆ လ ကနေ ၃၆ လ အထိရွေးလို့ရပါတယ်။
တစ်လငှားရမ်းခ (Rental Per Month) : ကြိုက်သလောက် အမှန်အတိုင်းရေးလို့ ရပါတယ်။ (အခွန်မလိုက်ဘူးလို့တော့ ထင်တာဘဲ။ ကြားတော့မကြားမိပါ။)
အိမ်ငှားကို ဘယ်လိုရှာသလဲ။ ကြိုက်ရာတစ်ခုရွေးပါ။
- ပွဲစားမှ တစ်ဆင့်ရှာပါသလား၊ (Through housing agent)
- သတင်းစာ မှာ ကြော်ငြာထည့်ရ်ျ ရှာပါသလား (By placing an advertisement in the press)
- အသိများကနေ တစ်ဆင့်ရှာပါသလား (Through recommendations by relatives,friends , neighbours and etc.)
- အွန်လိုင်းမှာ ကြော်ငြာထည့်ရ်ျရှာပါသလား (By placing an advertisement in the website)
- တခြားနည်းလမ်းဖြင့်ရှာပါသလား၊ ဖော်ပြပေးရန်။
၇. Section C မှာတော့ အိမ်ငှားရဲ့ အချက်အလက်များကို ဖြည့်ပေးရင်ရပါပြီ။
ပြီးရင် Continue ကိုနှိပ်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် HDB မှာ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပြီးသွားပါပြီ။
ဒီပို့စ်လေးသည် စင်ကာပူမှ အိမ်ပိုင်ရှင်များ သိထားသင့် သည်ဟု ယူဆသဖြင့် တင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
စင်ကာပူမှာ အိမ်ငှားကြော်ငြာချင်ရင် အောက်ပါလင့်ခ်များကို သွားရောက်ကြော်ငြာနိုင်ပါသည်။
အိမ်ရှင် အိမ်ငှား များအားလုံး ချမ်းသာ ကျန်းမာ လန်းဖြာ ကြပါစေ။
at Wednesday, March 13, 2013 ရေးသားသူ မျက်မှန်လေး